Mayelana NATHI - Kangda New Materials (Group) Co., Ltd.
IKANGDA NEW MATERIALS (GROUP) CO., LTD. esungulwe ngo-1988, kuyinto R & D futhi ibhizinisi zezimboni ikakhulu wahlanganyela ocwaningweni, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa kanye yokuthengisa ukusebenza okulingene nokusebenza high yokunamathela kwesakhiwo. Sinezinto ezahlukahlukene zemikhiqizo, njenge-acrylate adhesive, i-organic silica gel, ingcina ye-epoxy resin, ingcina ye-acrylate eshintshiwe, ingcina ye-polyurethane, ingcina ye-PUR eshisayo, i-SBS ingcina, njll. ekwakhiweni kwamandla omoya, ukufakwa okuguquguqukayo kokupakisha, ukuthuthwa kwezitimela, indawo yasemkhathini, ubunjiniyela basolwandle, amandla elanga we-photovoltaic, imikhiqizo yenjoloba kanye nepulasitiki, ubunjiniyela bezokwakha, izinto zasendlini ezisebenza ngogesi, izingxenye zezimoto, izinjini, amakheshi, imishini yezimayini, ukunakekelwa kwezimboni neminye imikhakha. Ngo-Ephreli 2012, inkampani yafika ngempumelelo emakethe ye-A-share futhi yathuthuka yaba ngomunye wabaphakeli abakhulu kunabo bonke bokunamathela kwesakhiwo nokunamathela kwezimboni eChina.
I-Kangda Materials entsha inaka kakhulu ukuthuthukiswa kwemboni entsha yamandla, ukongiwa kwamandla nokuvikelwa kwemvelo nezinye izimboni ezisafufusa, futhi ibilokhu inamathisele ukubaluleka okukhulu emisha ezimele, utshalomali lwe-R & D, kanye nokuqiniswa okuqhubekayo kwamandla we-R & D womkhiqizo. Ilinganiswa njengenye yeqoqo lokuqala "lamabhizinisi amasha aseShanghai", futhi inhlangano engaphansi kwayo, iShanghai Kangda Chemical Technology Research Institute, iyinhlangano yokuthuthukisa ubuchwepheshe bamabhizinisi eyaziwa yiShanghai. Ku-2010, sungula uhlelo lwangemuva kokusebenza kwamabhizinisi ePudong New Area.
Ngokususelwa ebhizinisini lokunamathisela nezinto ezintsha, i-Kangda New Materials iphelelise ukwakheka kwamasu embonini yezempi ukwakha inkundla yenkampani efakwe kuhlu "Yezinto Ezintsha + ubuchwepheshe bezempi", futhi ibilokhu inamathisela ukubaluleka kokuqamba okuzimele, utshalomali ocwaningweni kanye ukuthuthukiswa, kanye namandla okuqhubeka kokucwaninga komkhiqizo namakhono wokuthuthukisa. Le nkampani izuze i- "National Hi-Tech Enterprise", "National Enterprise Technology Center", "National Enterprise Postdoctoral Research Station", "Shanghai Adhesives Engineering -Technology Research Center", "I-CNAS National Laboratory egunyazwe yiNational Accreditation Service", " I-Germanischer Lloyd (GL) Isikhungo Sokuhlola Esivunyelwe SaseChina "," i-Shanghai Science and Technology Giant Cultivation-oriented Enterprises "," i-Batch yebhizinisi lokuqala le-Shanghai "nokunye.
R & D yethu isikhungo has amasethi ezingaphezu kuka-200 imishini R & D, onjiniyela 100 futhi 50% kubo degree Master noma ngaphezulu.
Phishekela iqiniso, ubuhle, ubuhle futhi ulwele ukwenza kahle
isikhungo se-kangda R & D
Ithimba le-Kangda R & D
Umbukiso & Umbukiso